Nyefee Music, SMS, Photos, Video na Ndi ana-akpo si HTC ka iPhone ngwa ngwa
Nyefee Music, SMS, Photos, Video, Kalinda na Ndi ana-akpo si HTC ka iPhone
Ị bulie ọhụrụ gị iPhone nanị na-aghọta na niile data ka bụ na gị ochie HTC ekwentị. Ị na-ala na dumps mgbe ya emee? Ọfọn, ugbu a na-abịa na-eju afọ obibia. Ihe ị chọrọ bụ HTC ka iPhone transfer ngwá ọrụ na-anapụtakwa gị site rụrụ ọrụ ike nke data nyefe si HTC ekwentị na mbadamba ka iPhone. Wondershare MobileTrans Ma ọ bụ ịgba dị ka ugboro achọ. Na ya, ị nwere ike ịkwaga kọntaktị, music, kalenda, ederede ozi, videos na foto site na HTC ka iPhone ozugbo na mfe.
Nkebi nke 1: otú nyefee SMS, Music, Photos, Video, Kalinda na Ndi ana-akpo si HTC ka iPhone
Part 2: Ụfọdụ Atụmatụ na iji Nyefee ngwa iPhone
Nkebi nke 3: Olee otú jikwaa gị iPhone mgbe transfer
HTC ka iPhone Nyefee, Quick, Mfe & Nchekwa
The HTC ka iPhone transfer omume na-eji na-enyere gị nyefee music, kọntaktị, SMS, photos, kalenda na video si HTC ka iPhone enweghị ihe ọ bụla ike.
Nyefee na kọntaktị site na HTC ka iPhone (iOS 9 akwado), na ọrụ aha, ụlọ ọrụ aha na nkọwa ndị ọzọ.
Detuo ha niile Kalinda na ozi ederede na gị HTC ekwentị iPhone.
Tọghata video na ọdịyo na iPhone dakọtara usoro - MP3 / MP4.
Ịgbanwee albums na foto site na HTC ka iPhone, otú i nwere ike na-ele ha n'ebe ọ bụla.
Nkwado multiple HTC ngwaọrụ na iPhones, gụnyere iphone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, HTC One X, na HTC Wildfire.
Ike gwụrụ nke na-ebufe data nke nta nke nta. Ugbu a, na otu na click, ị nwere ike nyefee niile si HTC ka iPhone.
Ọ bụghị nnọọ Nyefee Ndi ana-akpo
Ọ na-ahapụ ị nyefee ihe karịrị kọntaktị. Nke ahụ bụ, na ị na-ike idetu music, video, photos, kalenda, na SMS kwa.
Cross ekwentị Carriers
Ọ dịghị mkpa mgbe ị na-akpali faịlụ site na HTC ka iPhone na otu ma ọ bụ dị iche iche ụgbọelu (s). Ọ dị ya nnọọ na-eme na gị.
Akwado More Devices
Ọ arụ ọrụ zuru okè na HTC ngwaọrụ na iPhones. Ọzọkwa, ọ na-akwado Samsung, iPad, iPod aka, LG, wdg
Otú nyefee Ndi ana-akpo, Music, Photos, Video na SMS si HTC ka iPhone
1. Wụnye iTunes: Iji nyefee faịlụ na si iPhone, ị kwesịrị iji jide n'aka na iTunes arụnyere na kọmputa. 2. Nyefee Cloud kọntaktị: The HTC ka iPhone transfer omume nwere ike iṅomi kọntaktị niile, gụnyere ndị nọ akaụntụ, ma mkpa ka ị banye na ihe ndekọ na gị HTC ekwentị ma ọ bụ mbadamba na mmekọrịta kọntaktị na ya. 3. Nokia (Symbian) ekwentị: Ugbu a, Mac version anaghị akwado na-edegharị data ka / si Nokia (Symbian) ekwentị.
Nzọụkwụ 1. Download-agba ọsọ ahụ HTC ka iPhone Nyefee Mmemme
Iji malite, wụnye ihe omume na kọmputa gị na ẹkedori ya. Jikọọ gị HTC na gị iPhone gị na kọmputa site na eriri cables karị.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ekwentị na ekwentị transfer
Mgbe ahụ, họrọ na ekwentị ekwentị Nyefee mode na isi window. Mgbe ahụ ị ga-ahụ na ma gị na ngwaọrụ na-ahụrụ site Wondershare MobileTrans. Jiri tụgharịa button ka ha ebe ziri ezi.
Nzọụkwụ 3. Malite Ka idetuo kọntaktsị, kalinda, Photos, Video, SMS, na kọntaktị site na HTC ka iPhone 6s / 6s Plus / 6/6 Plus / 5 / 5s / 5c / 5 / 4S / 4 / 3GS
Ugbu a, na-amalite na ịpị Malite Copy na-amalite nyefe usoro. Nke a na-elu a dialog, site na nke ị nwere ike ịhụchalụ pasent nke faịlụ transfer ọganihu mmanya. Jide n'aka na ngwaọrụ abụọ ga-ejikọrọ oge niile.
Part 2. Ụfọdụ Atụmatụ na iji Nyefee ngwa iPhone
1. Search na Download ngwa site App Store
Ebe ọ bụ na ngwa-agba ọsọ na iPhone nwere dị iche iche formats si APK faịlụ, ị na-agaghị ekwe ka kpọmkwem nyefee ngwa iPhone. Otú ọ dị, ọtụtụ Android ngwa ọdịnala ha iPhone nsụgharị, dị ka Osisi vs. Zombies 2. bụrụgodị na e nweghị iPhone version, ị ka na-ahụ ọtụtụ edochi. N'ihi ya, chọọ na ibudata gị chọrọ ngwa ọdịnala na iTunes App Store.
Otu ihe, ụfọdụ ngwa ọdịnala na-akpaghị aka na-azọpụta gị data na ígwé ojii. Na nke a, ndị data ka ga na-ahụ mgbe ị na-eji ngwa ahụ na gị na iPhone.
Nkebi nke 3: Olee otú jikwaa gị iPhone mgbe Nyefee
iTunes nwere ike ịbụ akpa oke mgbe ị chọrọ jikwaa ihe niile na gị iPhone. Na ya, i nwere ike mmekọrịta music, video, photos, Ebook na ndị ọzọ gị iPhone, na nkwado ndabere data na gị iPhone na weghachite mgbe e mesịrị.
Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) bụ ihe iTunes Companion, nke nwere ike ime ihe na iTunes dara mkpụmkpụ. Ihe atụ, ọ na-enyere gị nyefee music, video na foto site na kọmputa gị iPhone na retaining ẹdude n'anya. N'okpuru ebe bụ isi atụmatụ. Na-agụ na.
Mma 1. Nyefee iPhone ka Computer na iTunes. Ọ Nyefe ọdịyo na video ka iTunes Library na ndị ọzọ na kọmputa.
Njirimara 2. Paghaa media si iTunes / na kọmputa na-iPhone. N'adịghị ka iTunes, ọ na-akwali video na ọdịyo na iPhone, ma na-eme faịlụ na ndidi ama na gị iPhone.
Njirimara 3. tọghata ọdịyo na video. Ọ bụla kedi ọdịyo na video ga-converted mgbe zigara gị iPhone.
Njirimara 4. Hazie kọntaktsị na gị iPhone. Nanị nyefee kọntaktị na site na gị iPhone ma dezie ha mfe. (Nani Windows version eme)
Nyefee Photos, kọntaktsị, kalinda, iMessage, Video na Music si iPod ka iPho
Otú nyefee SMS, Music, Video, foto na kọntaktị site na Symbian ka iPhone
Olee otú mbubata / nyefee gị vCard faịlụ ka iPhone ma ọ bụ iPad Mfe
10 Atụmatụ iji tọgharịa iPhone Battery na-edebe ya dị Ezi Ọnọdụ
Olee otú Zọpụta Notes si iPhone ka a Computer
> Resource> iPhone> Nyefee Music, SMS, Photos, Video, Kalinda na Ndi ana-akpo si HTC ka iPhone